English Myanmar Dictionary Sample — MYSTERY ZILLION
English Myanmar Dictionary Sample
September 2009 edited September 2009 in Project
မနေ ့က VB ၆.၀ နဲ့ရေးထားတဲ့ dictionary တ၀က်တပျက်version လေးကို လေ့လာချင်ကြတယ်ပြောတာနဲ ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီ sample မှာ အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတချို့ CD ကိုပြန်ဖတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့printing ပိုင်းပါတဲ့ version ကတော့ပြန်ရှာတော့ coding တွေ ပျက်နေတာတွေ ့ရတယ် မပါနိုင်တော့ဘူး အခုတော့ vb.net version လေးလုပ်နေတယ် ပိုက်ဆံပေးမဲ့လူမရှိတော့ခပ်ပျင်းပျင်းနဲ ့မို ့အစကနေမတက်နိုင်တော့ဘူးထပ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိချင်မှလဲရှိမှာ
ဒီမှာယူကြပါ ဒီcoding ကို အလကားပေးမဲ့project တွေမှာကြိုက်ရင်သုံးနိုင်ပါတယ် coder name လေးမှာပဲ မအိအိ နာမယ်လေးမထင်မရှားလောက်ထည့်ပေးရင် ရပါပီ
ရယ်စရာပြောရဦးမယ် 98 လောက် thai university တခုအတွက် pdf ဖတ်တဲ့ project တခုရေးပေးတာနောက်တော့ programmer name အမှားကြီးထိုးထားတာတွေ ့ရလို့တော်တော် feel တက်သွားသေးတယ် နောက်တော့လဲမြန်မာနာမယ်မပေါင်းတတ်လို ့လိုပဲဖြေရတော့တယ်
D မှာ ယူပါ
ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်... မမအိအိ.... အခုလို စေတနာ နဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.... မမအိအိ ရေးထားတာကို ကျွန်တော့် အနေနဲ့တော့ လေ့လာရုံလောက်ပဲ တတ်နိုင်မှာပါ.. ပြင်ဆင်ဖို့ ထပ်တိုးဖို့ဆိုတာတော့ အိပ်မက်တောင် မမက်ရဲသေးပါဘူး.... ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ မမအိအိလိုမျိုး ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရလို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်.. နောက်ပြီး MZ က မောင်နှမတွေဖြစ်ခွင့်ရလို့ ပိုပြီး ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ခင်ဗျာ...
အဲ.......... မမအိအိ ဒေါင်းလို့ရဘူးရော........... လုပ်ဦးဂျ...
Thanks A Lots4your Kindness!
အဟီး မအိအိ ယိုးဒယား ကို ပရော့ဂျက်ရောင်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ တားတို့ ဂေါ်လီရိုက်တုန်းရှိဦးမှာ (98)တုန်းကပြောပါတယ်.... :d:d:d ကိုစိုင်းပြောသလိုပါပဲ... အဲ့ဒီ ကုဒ်တွေမြင်ခွင့်ရတာ ကိုပဲ အတော်လေး ကံကောင်းနေပါပြီဗျာ... နောက်လဲ ခုလိုသိမ်းထားတာလေးတွေရှိရင် မောင်လေးတို့ကိုမျှပါဦးနော်.... ဆက်သိမ်းထားချင်လို့..အဲ့လေ လေ့လာချင်လို့ပါ..... မအိအိ ပြောမှ vb ကိုလေ့လာချင်စိတ်ဖြစ်လာလို့ ပရိုဂရမ် ရေးဖို့က ကျတော့မှာ ပါရမီကပါမလာ တော့ တော်တေ်ာလေး ကြိုးစားရဦးမယ်... :d:d:d ခုလို ဝေမျှပေးတဲ့ မအိအိကို ကျေးဇူးကမ္ဘာပါဗျာ... :77::77::77:
ပြန်တင်ပေးလိုက်တယ် မေ့လို့ peedy.exe နဲ့ fxgold ကိုinstall လုပ်ပီးမှဖွင့်ပါ
ပိုက်ဆံပေးမှ ဆိုတော ့..ဟင်းဟင်း..မကောင်းဖူးလေဂျာနော်..အနော်တို ့ဆို..ဒီလိုပဲ လိုက်သင်နေရတဲ ့ဟာကို ..အဟင့်..ဆက်လုပ်ပါ.လေးစားတယ်...အားကျတယ်ဂျာ။
ထိုင်းက ဘယ်လို ရေးလိုက်လို လဲဟင် ?
RSက ဆွဲလို့အဆင်မပြေနိုင်သူတွေအတွက် .. ကျွန်တော် multiupload မှာပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
ခက်တာက window vista မှာ အလုပ်မလုပ်ဘူးဗျာ့
မei ရေပြောပါဦး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိ
ဘယ် ဟာကို အရင် install လုပ်ရမှာလဲ ခင်ဗျ..
.exe က peedy တစ်ဖိုင် ထဲ ပါတယ် ဗျ..
ကျန်တာတွေ က .mdb ဖိုင်နဲ့.jpg . vb ဖိုင်တွေ
FXTools Gold V5.0 က install လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ် ဗျ.. XP မှာပါ..
မအိ ကို တစ််ခုလောက် မေးချင်ပါတယ်.. vb6အတွက် mz tools ဆိုတဲ့plug in ဆိုတာ ရှိတယ် ဗျ